Print Page - Su'aal: Siigeysashada iyo Caafimaadka?!
Diseases and Conditions => Qaybta Su'aalaha => Topic started by: Ahmed333 on August 24, 2009, 12:41:04 AM
Title: Su'aal: Siigeysashada iyo Caafimaadka?!
Post by: Ahmed333 on August 24, 2009, 12:41:04 AM
waad salaamantiin dhamantiin waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado dadka gacanta biyaha iskaga keena cafimaadka galmada ama guud ahaan cafimaadka ma dhaawici kartaa sidee se u dhaawici kartaa inaan waxa ka ogaadaan rabaa waad mahdsantiin.
Title: Re: Suáal: Siigeysashada iyo Caafimaadka?!
Post by: SomaliDoc on August 29, 2009, 11:59:11 AM
Waa Maxay Siigeysi?
Caadadaan ma ahan mid diinta, dhaqanka iyo caafimaadkaba u roon, dhibaatooyin badan ayaaa laga dhaxlaa, dhalinyaro badan oo cadadaan joogteysay ayaa illaa hadda la rafaadsan dhibaatadii ka soo gaartay oo weli xal u heli la'.
Dadka ugu badan oo cadadaan sameeyo waa dhalinyarada waliba wiilasha xilliga qaangaarka ku jiro iyo sanadaha ku xiga.
Waa maxay dhibaatada caafimaad ee Siigeysashada?
4- Kacsi la'aan (Hawlgabka kacsiga ee dhalinta), hami yarida iyo kacsi la'aanta waa cillad ay keenaan waxyaabo badan, siigeysiga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu horreeeyo oo arrintaan ay keento khaas ahaan markuu qofka la qabsado siigaysiga, fadlan halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan howlgabka kacsiga iyo xalkiisa intaba: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,625.0.html (http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,625.0.html)
5- Biyo-bax degdeg ah, in qofka uu in muddo ah uusan celin karin biyahiisa xilliga galmada waxay noqon kartaa raad uu siigeysiga ku reebay waana dhibaato aad ugu badan dhalinyarada guursatay awalne caadadaan joogteyn jiray, halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan biyo-baxa dagdagga ah: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2121.0.html (http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2121.0.html)
6- Aragga oo caad yeesho ama aragtida oo daciif noqoto waa xaalad lagu arko dhalinyarada ku duqowday siigaysashada oo muddada dheer soo samaysay, mana ahan caadkii indhaha fuuli jiray ee la yaqiinnay "cataract" ee waa nooc ka duwan.
10- Wuxuu kaloo keenaa waxa loo yaqaano "Semen leakage" oo ah in biyuhu soo dareeraan iyadoo wax dareen kacsi ah uusan jirin ama iyadoo kacsi jirin in qofka uu biyo-baxo ama isagoo aan dareeminba.
11- Dhibaato nafsaani ah sida hilmaamidda iyo xifdin la'aanta, tanni waa mid ay dhakhaatiirta arrintaan la tacaalo ay ka sheegaan dadka caadaystay howshaan, waana arrin ay dhib badan tahay in caafimaad ahaan loo xalliyo haddii ay kaa soo gaartay siigeysiga.
Sidee loo joojin karaa Siigeysiga?
Waxaan kula talin lahaa dhalinyarada arrintaan samayso in ay diinta wax khilaafsan ay tahay, caafimaadka iyo mustaqbalkoodane saameyn weyn ku leh, sidaa awgeed haddii aad awooddo in aad guursato oo arrintaan si sharci ah oo caafimaadne ku heli doontid ay kuu suuragalayso waan kugu la taln lahaa, haddii aadan awooddaas aadan haynin, waxaan kugula talinayaa in aad raacdid taladii rasuulkeena nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee in uu dhalinyarada kula dardaarmay in ay soomaan haddii uu dareenkooda uu kacsan yahay, waana wax cilmi ahaan loo arkay in soonka uu hoos u dhigo hormoonnada la xiriira kacsiga.
Haddii aad caadadaan ku walaftay ama aad 'addict" ku tahay, waa in aad aragtd dhakhtar 'psychologist' si lagaaga gooyo caadadaas.
Haddii dhibaato ay iga soo gaartay Siigeysiga, Sidee ku xallin karaa?
Siigeysiga haddii la joojiyo waxuu jirka isku dayaa in uu dib isku habeeyo oo uu saxo wixii isbadala ama khalal ku dhacay xagga dheecaannada iyo hormoonnada kontroola jirka qeybihiisa kala duwan, way ku kala duwan yihiin qofka inta uu caafimaadkiisa ku soo ceshan karo, waxayne ku xiran tahay muddada aad caadadaan samayn jirtay.
Haddii ay dhibaatooyinkaan kugu daaheen oo ayna kaa go'antahay in caadadaan aad joojisid, fadlan la xiriir takhtar aad ku kalsoon tahay si uu talo kaa siiyo.
2- Cunto isku-dheelli tiran cun, waxaad badsataa khudradda iyo fruits-ka, qeybihiisa kala duwan.
3- Sameey jimicsi joogto ah sida in aad rucleyso ama socod lugta ah aad gasho muddo nus saac ah.
5- Haddii aad waalid tahay oo aad caruurtaada uga cabsi qabtid arrintaan waa in aad si waalidnimo iyo saaxiibtinnimo ku jirto aad kala sheekaysataa caruurtaada adigoo si dadban oo aan cannaan iyo ciqaab ku jirin uga wacyi galiya.
Haddii aad u baahantahay faahfaahin dheeraad ah ama su'aalo aad qabtid waad na soo weydiin kartaa.
Caafmaad baan idin rajaynayaa.
Post by: Faaciye on September 06, 2009, 03:38:29 PM
walalahi webkaa waan ku faraxan markaan arkay sida Suuban oo layku dhaafasanato su,aalaha helths
su,aasheeda waxa weeye
waxaan qabaa dhibaato ah sida hilmamida iyo xifdinta
tan kale biyah shahwada dhakhso bee iga imaadaan
haduu yahay qodobkaan ugudanbeeya
xalka maxuu noqon karaaaaa???
Maxaa se daawo U ah
Post by: SomaliDoc on September 07, 2009, 10:26:36 AM
Waxaan filayaa in suáashaada xifdin laáanta ku saabsan aad halkaa ka akhrisan karto:
Suáasha kale ee biyo bax degdeg ahne halkaan ayaa kaga bogan kartaa
Haddii aad qabto suáalo kale oo ku saabsan halkaan ka sii weydii
Post by: Ahmed333 on September 13, 2009, 06:28:04 AM
dhiibato ma ku yeelataa siinagysigu xaga dhalmada macnihii ma dhalays xaga raga taa maxaa ka jira qofku hadii uu ku walfo
maxaad kula talin lahaydeen inuu sameeyo si uu iskaga daayo waad salamantiin aqyaarta aad ayaay u mahdsanyihiin.
Post by: SomaliDoc on September 15, 2009, 11:32:37 AM
In siigeysigu uu keeno madhalaysnimo weli lama sheegin, qofka hadduu ku walfo wuxuu u baahanyahay inuu qaato goáan adag oo sida qofka iskaga gooyo sigaar cabidda oo kale.
TALO: Haddii aad tahay nin nalinyaro ah oo aan xaas laheyn guurso.
Post by: Dr.Barkhadle on October 07, 2009, 08:45:12 PM
Fadlan walaal si wacan bal iiga soo qanciya su,aalahan ? Tusaale ahaan qofka waxan oo kale sameeya
Siigaysigu Maxaa xal u ah ?
SIdeese layskaga dayn karaa xaas la,aan ?
Mustaqbalka Caafimadkiisa waxyeelo inteese leeg bay ugaysata
Post by: SomaliDoc on October 12, 2009, 11:56:43 AM
Walaal waxaan filayaa in sáashaada laga jawaabay.
Akhri qoraalka kore.
Post by: Salaadyare on November 25, 2009, 09:23:26 AM
asc dhamaan walasha somaliyed salan kabacdi drka qeyr alaha siye waxa uu shegay sigeysiga ay keento waxyaaba badan oo caafimad daro ah waxa kamid ahaa indhaha oo arag xumada ama caad yeesho marka caadkaas side buu qofka usameyn karaa qofka aragiisana wax ma udhibaa mana labaabi inkaraa caadkaas maadaaba ay sababtay siigada sida qoralka ku cad qofkuna miyuu u baahanyahay classes ama oo kiyaale?
waana mahadsantihin dhaman walalaha qaas ahan drka asc.
Post by: SomaliDoc on December 02, 2009, 08:46:23 PM
Caadka ama humaaga indhaha fuula siigada awgeed wuxuu daciifin karaa aragga.
Inkastoo weli la isku waafaqsanayn qaabka siigadu indhaha u waxyeeleyso laakiin waa laga hortagi karaa dhibaatadaan iyadoo laga fogaado caadadaan lana cuno cunno nafaqeysan.
Haddii qofku uu ka cabanayo dhibaatada aragga noocaan oo kale ah waa inuu la xiriiraa dhakhtar ku taqasusay indhaha si loo baaro wixii daawo ama ookiyaalo ahna loogu qoro.
Post by: Xussen on January 06, 2010, 12:24:42 PM
Assalaamu calaykum dhamaan bahda webka somalidoc
bacda salaan walaoyaal aad ayaad ugu mahadsantihiin su aasha iyo walaiba jawaabtan haboon
haseyeeshee walaalayaal maxaa lagaga goonkaraa qof bartay siigeesiga?
Post by: Qadafi on June 09, 2010, 11:20:29 AM
sw walayaal bacda salaan waxaan doonayaa in aan idin waydiiyo anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan aadka u qaaliga ah qofka caadaystay siigeysiga siddee looga daawayn karaa specially markuu qofku yahay dhanyaro talo iy tusaale fiican ayaan idinka sugayaa
Post by: Ashwaaq on June 10, 2010, 03:21:18 PM
]W/wasalaam, Salaan kadib waxan u shegayaa dhalinyaadan somaliyeed kuna birinaya figradeyda yartaa
horta waxa barato wa baaska bey tiraahda somalidu, saas ayadoo ah hadii aad rabto in aad iskaga goyso siigada
1 guurso hadii aad awooeo sida ugu dhaqsiyaha badan
tankale ku samee noloshaada isbadal
sida waqtiyadii aad sameen jirtay oo aad seexato
in ad i ka ka aado kubada cagta si aad iskugu mash quuliso
in aad sameeyso camal / shaqo oo aad inta badan waqtigaaga siiso si aad u iloowdo
makaas aad noloshada isbadal gareyso waa macquul in aad iska goyso Sigadaan,
Ogoow siigadu cafimaadkaaga uma wanaagsana thanks all ;D[/color]
Title: Re: Su'aal: Siigeysashada iyo Caafimaadka?!
Post by: Xog-doon on October 13, 2010, 11:30:06 AM
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin bahda Somalidoc. Aad ayaan ula dhacay howlahiina, qeyr Allaha idin siiyo... Aamin Amiin Amiin.
Waxaan daneynayaa in aan ogaado arrimahan:
1. “Timaha oo daata ama yaraada” - bidaar ama salxo mala dhihi karaa way keeni kartaa siigadu?
2. “Xifdin la’aan” - xifdil la’aantaasi xal maloo heli karaa oo ma ka soo kabsanayaa, hadiiba ay dhacdo in aan iska gooyo siigadu?
3. Gabdhaha saameyn maku leedahay siigadu, sida wiilasha oo kale?
4. (Tusaale ahaan), waxaan ahay wiil mudo ka badan 10 sano ayaana sameynayay arrintan (asbuucii 2/3 jeer) (markii hore waxaan isku arki jiray in aan si degdeg ah u biyo-baxo markii aan sameynayo mudo ka dibse waxaan isku arkay ilaa 10/20 daqiiqo inay iga yimaadan) Marka, ma isla sidii ayay ii saameyneysaa mise...??
Jawaab wanaagsan ayaan idinka rajeynayaa, waadna mahadsan tihiin mar kale. ;D
Post by: Abdiman on March 17, 2015, 08:15:38 PM
salaan kadib walaal waxaan qabaa su'aal ah "waxaan ahay nin 38 jir ah waxaan si joogto ah u samayn jiray seegada muddo ku siman ilaa 14 ah oo ka bilaabma qaan gaadhkaygi oo haa 11 jir ilaa 25 jirkaygii oo ah ka hor intii aanan guursan" markaa hadda waxaan dareemaa jilbo xanuun dhabar xanuun, hamada oo marka aan hamoodo halmar wax ka badan aanan samayn karin 24-ka saac sidoo kale biyaha hore iiga yimaada iyada oo aan weli ka imaan xaaska" fadlan maxaa talo ama xal ii haysaan inaan 2 jeer ama ka badan samayn karo galmo 24 ka saac ama ka badan.
Aad ayaad u mahadsantihiin wll iyo su'aal wacan.
Post by: SomaliDoc on March 21, 2015, 03:23:14 PM
Haddii siigada aad joojisay 13 sano ka hor, waxaa laga yaabaa cilaldaha aad dareemayso in aysan xiriir la lahyn ee fadlan halkaan ka akhriso qroaal ku saabsan hami yarida, kacis la'aanta iyo biyo-baxa dagdaggga: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,625.0.html (http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,625.0.html)
Post by: Nasriin on April 25, 2015, 12:19:04 PM
dadka saa samaynaya cadhada allah in ay ku dhacdo miyuun ka yaabayn subxanallah
masiibadaa inta haysata oo waxas ka caada dhigtay waxan kula talin lahaa ka fogaada cadhadaas
iyo cudur aad gacanta ku kasbateen
allaha guur idinku arsaaqo iyo allah ka cabsi
Post by: Fahrer2015 on October 01, 2015, 09:27:33 PM
aad bay u xuntahay in biyo gacan la isaga keeno waxaa fiican inaan ka fogaano, biya baxa dag daga ah wuxuu u xun yahay kalsoonida aad iska qabto iyo xidhiidhka qoyska, reerba rerka sariirtoodu ka guux badan tahay ayay ka farxad badan yihiin! taas waa dhab waadna ogaan doontaa.marba hadii aadan hawsha wadan karin waxa kaa maqan qayb ragnimadaadii kamid ah. biyo baxa dagdaga ah waa la joojinkaraa lakin taas kuma imanayso habeen iyo bilo toona , g*kaga waxad u taba baraysay sanado badan si aad biyo isaga keento dag dag ah, waayo waxa loo siigaystaa waa in aad biyo iska keento. mararka qaar waliba kuwo dag dag ah,marka waad la qabsatay, waxa biyaha dadajinaya waxa lagu micneeyaa 1. maskaxdada oo dareenkii ka danbatay oo si xawli ah u shaqaynaysa marka xagaa lookaco. 2. nerveyaasha g*ska oo aad sensative u noqday. labadaba waa dhab iska daa sigaysiga totally balse markaa marayso after 1 month check xubinkaaga tarank a gacant ugu qabo sidaad u sigaysan jirtay waxaa ku cadaanaysa in dareenkii badnaa ee g*sku uu meesha kabaxay taas micnaheeda waxaad haysa dariiqdi saxda ahaa. dib ha ugu laabanin keep going bro!! cibaadada uma ficna siigaysigu, wahsi iyo caajis farabadan ayaa kugu adkaynaya inaad markaste oo sigaysatid aad qubaysato si aad salaada isugu diyaariso. agow siigaysigu waa camal shaydhaan.